မယ့်ကိုး: ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုနှင့်အတူ ကြီးပြင်းလာသောအခါ
နှစ်ကူးကစပြီး ရီဟားနားနဲ့ ခရစ်ဘရောင်းတို့ ပြန်လည်ချစ်ကြည်နေပြီသတင်းကို ဖတ်ပြီးပြီးပဲ မကျေမနပ်နဲ့ ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲ။ မကျေနပ်ဘူး လို့ မိတ်ဆွေကိုပြောတဲ့အခါ မင်းသား၊မင်းသမီးတွေအကြောင်းကို စိတ်ဝင်စားသူပဲ လို့ ကင်ပွန်းတပ်ကဲ့ရဲ့ခံလိုက်ရပါတယ်။ ရီဟားနားဟာ ကျော်ကြားတဲ့အဆိုတော်မင်းသမီးဖြစ်လို့ ကျွန်မ ပြောနေတာ မဟုတ်ဘူးလို့ သူ့ကို ချက်ချင်းပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ တကယ်ပါ။ ကျွန်မအတွက်တော့ ရီဟားနားဟာ ချစ်ခင်ကြင်နာစရာ ညီမငယ်တစ်ယောက်လိုသာရယ်။
၂၀၀၉ ခုနှစ် ၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၈ ရက် ဂရမ်မီဆုပေးပွဲမတိုင်ခင်ညမှာ ခရစ်ဘရောင်းက ရီးဟားနားကို မျက်နှာတစ်ခုလုံး ဖူးဖူးယောင်တဲ့အထိ ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်ဖြစ်ရအောင် ရိုက်ပုတ်နှိပ်စက်ပြီး သတ်ပစ်မယ်လို့ ခြိမ်းခြောက်ခဲ့တာကို ကျွန်မ မမေ့သေးဘူး။ ဘယ်သူမှလည်း မေ့လိမ့်ဦးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် သူမကတော့ မေ့ခဲ့ပါတယ်။ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုအဖြစ် စတင်စစ်ဆေးအရေးယူချိန်ကစပြီး ခရစ်ဘရောင်းရဲ့ သီးချင်းထုတ်လုပ်မှုကို ရေဒီယိုတွေမှာ ရပ်ဆိုင်းလိုက်တာ၊ ဖျော်ဖြေရေး၊ကြော်ငြာရေးစာချုပ်တွေ ပယ်ဖျက်သွားကြတာကြောင့် ခရစ်ဘရောင်းရဲ့ အနုပညာအသက်မွေးမှုရပ်သွားမှာ သူမက စိုးရိမ်ကြောင့်ကြစိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့တယ်လေ။ ရီဟားနားဟာ ခရစ်ဘရောင်းဆီ ပြန်သွားခဲ့တာရယ်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၇ ရက်နေ့မှာ မီယာမီကမ်းခြေမှာ သူတို့နှစ်ဦးအပန်းဖြေနေပုံကို ကျွန်မတို့ မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မဟာ တစ်ခြားသူတွေလိုပဲ ရီဟားနားဟာ ဒီလောက်မမိုက်မဲဘူးလို့ ယုံကြည်တယ်။ ရီဟားနားဟာ စိတ်ထားကြီးမြင့်သူမို့ ခရစ်ဘရောင်းကို မိတ်ဆွေအဖြစ်ဆက်လက်ပေါင်းသင်းပြီး ဂီတလောကမှာ ပြန်လည်ရပ်တည်ခွင့်ပေးခဲ့တာလို့သာ ထင်ခဲ့ရဲ့။၂၀၀၉၊ မတ်လ ၁၂ ရက်နေ့က အိုဖရာရဲ့ တင်ဆက်မှုအစီအစဉ်မှာ သူမက ‘ယောက်ျားတစ်ယောက်က ရှင့်ကို တစ်ကြိမ်ရိုက်တာနဲ့ နောက်တစ်ကြိမ် သူ ရိုက်ဦးမှာပဲ’ လို့ ပြောတဲ့အခါ သူမကို တာဝန်သိတတ်မှုရှိတဲ့ မိန်းကလေးအဖြစ် စိတ်ချနှစ်လိုသွားခဲ့သူမှာ ကျွန်မဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်မလိုပဲ ကမ္ဘာအနှံ့က အမျိုးသမီးတွေဟာ ရီဟားနားကို လေးစားချစ်ခင်ကြတယ်။ ကိုယ်ချင်းစာနားလည်ကြတယ်။ တစ်ချို့မိန်းကလေးငယ်တွေကတော့ အားကျအတူယူကြတယ်။ ဒါကြောင့် အချစ်နဲ့ခွင့်လွှတ်မှုဆိုတဲ့ အမည်နာမမှာ သူမကို ငေးကြည့်နေတဲ့ မိန်းကလေးငယ်တွေ သေစေနိုင်တယ်ဆိုတာ သူမနားလည်ခဲ့ပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေရဲ့ စံအဖြစ်သူမကြိုးစားကြိုးစားရပ်တည်ခဲ့တယ်။ တခြားတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုတစ်ခုမှာလည်း သူမဟာ ‘ ခရစ်က ကျွန်မကို နောက်တစ်ကြိမ်မရိုက်ပုတ်ဘူးဆိုရင်တောင် သူတို့ရည်းစားတွေက သူတို့ကို မရိုက်ဘူးလို့ ဘယ်သူပြောနိုင်မှာလဲ။ သူတို့ ဒီကောင်မလေးတွေကို မသတ်ဖြတ်ဘူးလို့ ဘယ်သူအာမခံနိုင်မှာလဲ’ လို့ မျက်ရည်တွေကြားက သူမဖြေခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီပုံရိပ်တွေဟာ သုံးနှစ်ကြာခဲ့ပြီလေ …ဟုတ်။ လူဆိုတာ ပြောင်းလဲတတ်တာကြောင့်လား။ သူမကပဲ မပြောင်းလဲတာလား။ သူငယ်ချင်းတွေလိုပါပဲ ဆိုကာ ခရစ်ဘရောင်းရဲ့ ‘birthday cake’ သီချင်းကို သူမကဖြည့်စွက်ဆိုကာ ကျွန်မတို့ကို မျက်စိလည်စေခဲ့ပြန်တာ။ ဒါဟာ ပုံမှန်အရ ကောင်းမွန်ကျန်းမာတဲ့ ဆက်သွယ်ရေးမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်မဟာ ရီဟားနားကို စိတ်မချဘူး။ twitter မှာ ပရိသတ်တစ်ယောက်က ဝေဖန်တဲ့အခါ သူမ မခံမချိမသာအောင် စိတ်ဆိုးပြီး ပြင်းပြင်းထန်ထန်တုန့်ပြန်တတ်တာ။ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတွေမှာ အချစ်ရေးနဲ့ပက်သက်ပြီးမေးတိုင်း ကြွပ်ဆတ်ပြတ်တောင်းစွာဖြေတတ်တာဟာ စိတ်ထားမျှတသင့်တင်သူပြုလုပ်သင့်တဲ့ အမူအကျင့်တွေ မဟုတ်ပါဘူး။
သူမတစ်ယောက် စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းနေတာ အသေအချာရယ်။ အသေးအဖွဲကိစ္စတွေမှာ အလွန်အကျူး ပေါက်ကွဲတတ်တာဟာ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းရဲ့ လက္ခဏာတစ်ခု မဟုတ်လား။ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးစိတ်ပညာရှင် Jo Hemmings ကတော့ 'ရီဟားနားရဲ့ အပြောင်းအလဲမြန်တဲ့စိတ်အခြေအနေဟာ သူမမှာ NPD - Narcissistic personality disorder (အတ္တကြီးလွန်းတဲ့ စိတ်ရောဂါ) ခံစားနေတာကို ညွှန်ပြနိုင်တယ်။ ရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အရေးပါချင်စိတ် အဆမတန်များပြားနေတာ၊ သူတပါးရဲ့ အာရုံစိုက်မှုနဲ့ သဘောကျနှစ်သက်မှုကို အဆက်မပြတ်လိုအပ်နေတာပဲ။ ဒီအချက်တွေကို ရီဟားနားက အဝတ်အစားတစ်ဝက်တစ်ပျက်ချွတ်ထားတဲ့ပုံတွေကို တင်ပြီး ပြသနေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
စိတ်ပညာရှင်တွေက ဒီလိုဆိုကြတာဟာ twitter မှာ သူမရဲ့ ဓာတ်ပုံများ၊ စာများ အဆတ်မပြတ်တင်ခြင်းနဲ့ ဟာဝိုင်အီမှာ အပန်းဖြေသွားရင်းမှာတောင် သူမရဲ့ အပေါ်ပိုင်းအဝတ်အစားမဲ့ပုံကို တင်ပြခဲ့ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ လေ့လာနိုင်တဲ့အချက်တွေကတော့ အတ္တကြီးလွန်းတဲ့ စိတ်ဖောက်ပြန်သူတွေဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အရေးပါအောင် ပုံကြီးချဲ့ကားပြောဆိုလုပ်ကိုင်တတ်တယ်။ အဆုံးမဲ့အောင်မြင်ချင်တဲ့ စိတ်ကူးယဉ်မှုမှာ နစ်မြုပ်ထားတတ်ကြတယ်။ ပြီးတော့ အများတကာရဲ့ အာရုံစိုက်မှုကို မရပ်မနားရှာဖွေလုပ်ကြံနေတတ်ကြတယ်လေ။
ဒီလိုတွေ ဆွေးနွေးဝေဖန်ကြပေမယ့်လည်း သူမဟာ ထိုထက်ဖော်လှစ်သောဓာတ်ပုံများကိုပါ တင်ပြလာခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲ။ သူမဟာ အတ္တကြီးလွန်းလို့ စိတ်ဖောက်ပြန်နေသူတဲ့လား။ မဟုတ်သေးပါဘူး။ ကျွန်မ ချစ်ခင်နှစ်လိုခဲ့သော၊ ချစ်တဲ့သူရဲ့အနိုင်ကျင့်ခံရမှုကို မပြိုလဲဘဲရင်ဆိုင်ခဲ့သော မိန်းကလေးဘယ်ရောက်သွားပြီလဲ။
သူမ အသွင်းပြောင်းသွားခဲ့တာပါ။ ‘နာမည်ကြီးလူသိများစေချင်တဲ့အတွက် အများရဲ့အာရုံစိုက်ခံလိုခြင်း ပြင်းထန်နေသူလဲဖြစ်ပါလျှက် မိန်းကလေးတွေရဲ့ စံအဖြစ်ကြိုးစားရပ်တည်ခဲ့တဲ့သူလဲဖြစ်ပါလျှက် ထိုယောက်ျားတယောက်ကို ချစ်သူတွေအဖြစ် ပြန်လည်လက်သင့်ခံခဲ့တဲ့ စွဲလမ်းတပ်မက်မှုက တော်ရုံတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးး။ ဘာလို့ဆို... ဒီနှစ်ခုက တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ကြီးမားတဲ့ အဟန့်အတားဖြစ်စေတာမို့...’ လို့ စာရေးသူ Turn On Ideas က မှတ်ချက်ပေး မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့။ အနိုင်ကျင့်စော်ကားခဲ့သူကို ချစ်သူအဖြစ် ပြန်လည်လက်ခံခဲ့သောမိန်းမတစ်ယောက်အကြောင်းရေးရာမှာ အဓိကအချက်ကို ဆိုခဲ့တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်း အရင်ဆိုပါရစေ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဟု ဖြေရပါလျှင် ရီဟာနားဟာ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်တတ်တဲ့ အဖေနဲ့ အတူကြီးပြင်းခဲ့ရခြင်းကြောင့်ရယ်။ ရီးဟားနားရဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲနေတဲ့ ဖခင်ဟာ မိခင်ကို ရိုက်နှက်နှိပ်စက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ မိခင်က ဖုံးကွယ်ထားပေမယ့် ရီဟားနားလေးဟာ ဒီညှင်းပန်းမှုတွေကို သိခဲ့ပါတယ်။
စာနာသနားစရာ ကလေးငယ်ရယ်လေ။ ညတွေမှာ သူမဟာ အိပ်မပျော်နိုင်ဘဲ နိုးနိုးကြားကြားနဲ့ မိဘတွေ ဘယ်အချိန်ရန်ဖြစ်မလဲဆိုတာ ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ စောင့်နေခဲ့တာပါ။ မိဘတွေရန်ဖြစ်ကြရင် သူမက အလယ်မှာနေကာ ရပ်တန့်တားမြစ်နိုင်အောင် ကြိုးစားခဲ့ချင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစိတ်ဖိစီးမှုတွေဟာ ရီးဟားနားရဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုတောင် ပြင်းထန်စွာသက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
အသက်ရှစ်နှစ်အရွယ်ကစလို့ သူမမှာ ခေါင်းကိုက်ရောဂါအပြင်းအထန်စွဲခဲ့ပါတယ်။ နာကျင်မှုပြင်းထန်လွန်းလို့ ဦးနှောက်မှာအကျိတ်ဖြစ်နေသလားဆိုကာ ဆရာဝန်က စစ်ဆေးဖို့ ညွှန်ကြားခဲ့ပေမယ့် ကံအားလျှော်စွာပဲ ဘာချွတ်ယွင်းချက်မှ မတွေ့ခဲ့ပါဘူး။ သူမကလေး အသက်ဆယ့်လေးနှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါ မိဘများ လမ်းခွဲလိုက်ကြတဲ့အခါမှာတော့ ဆိုးရွားတဲ့ခေါင်းကိုက်နာဟာ ပျောက်ကင်းသွားခဲ့ပါတယ်။
ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကို ပြန်တွေးရင်း ၂၀၀၉၊ နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက် ၊ 20/20 ဆိုတဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုတစ်ခုမှာ ‘ကျွန်မရဲ့ အဖေလိုမျိုးလူနဲ့ ဘယ်တော့မှ မတွဲဘူး’ လို့ သူမက ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၂၀၁၂ အိုဖရာရဲ့ အင်တာဗျူးမှာ သူမဟာ ငယ်ချစ်ဦး ခရစ်ဘရောင်းကို ခွင့်လွှတ်ခဲ့ပြီးပြီ။ အခုထိ ချစ်နေတုန်းပဲလို့ ဖြေရင်း သူမရဲ့ပရိသတ်များကို ရင်ထုမနာဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။
ဘာဖြစ်လို့လဲ။ သူမရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို ညှိုးရော်စေမယ့် ၊ ရရှိနေတဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်ကြင်နာမှုကို တွန့်ဆုတ်လျော့ကျစေနိုင်တဲ့ လမ်းကို ဘာလို့ရွေးချယ်ခဲ့တာလဲ။ ခရစ်ဘရောင်းကိုပဲ ဘာအတွက် တသသချစ်မက်နေရတာလဲ။နှိပ်စက်ညှင်းပန်းခံခြင်းရဲ့ ဆိုးရွားနာကျင်မှုကို အတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်ပါလျှက် ဘာအတွက်ကြောင့် နှိပ်စက်သူဖြစ်ရခြင်း စက်ကွင်းက လွတ်မြောက်ဖို့ မကြိုးစားတာလဲ။ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းကို ရင်းနှီးကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ကလေးတွေဟာ တခြားသူတွေနဲ့ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်သူတွေ၊ဒါမှမဟုတ် နှိပ်စက်ခံရသူတွေ ဖြစ်နိုင်ခြေ ဆယ်ဆ ပိုများတတ်ပါတယ်တဲ့။
ဒီလို နှိပ်စက်မှုစက်ဝန်းအောက် အသွင်ပြောင်းကြသူတွေထဲမှာ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်သူနေရာကို ယောက်ျားလေးတွေက ရောက်ရှိသွားတတ်ပြီး မိန်းကလေးတွေက နှိပ်စက်ခံရသူတွေ ဖြစ်သွားပါတယ်။
ဘာအဖြစ်ကြောင့်ပါလဲ။အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ ငယ်နုတဲ့စိတ်ကလေးမှာ အားနည်းသူကို နှိပ်စက်ခြင်းဆိုတာ အရွယ်ရောက်သူတွေရဲ့ အလေ့အထ၊ လက်ခံနိုင်တဲ့ ၊လက်ခံလို့ရတဲ့ အခြေအနေအဖြစ် မသိလွဲမှားစွာ စွဲထင်သွားလို့ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့ဆိုပါလျှင် ရိုက်ပုတ်နှိပ်စက်ခဲ့သူ ခရစ်ဘရောင်းကရော ။
ခရစ်ဘရောင်းဟာ သူ့မိခင်ကို ပထွေးက ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းကို မျက်မြင်တွေ့ဆုံခဲ့ရသူဖြစ်ပြီး ကိုယ်တိုင်ပဲ အားနည်းသူကို ညှင်းပန်းအနိုင်ကျင့်သူဖြစ်လာပါတယ်။အကြာင်းမလှ ကံဆိုးစွာပဲ ခရစ်ဘရောင်းနဲ့ ရီဟားနားဟာ ဒီဇာတ်ရုပ်တွေကို မလိုလားပေမယ့် မတွန်းဆန်နိုင်ဘဲ ကိုယ်တိုင်ချောင်ပိတ်မိခဲ့သူများဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ငယ်နုစိတ်မှာ စွဲထင်ခဲ့တဲ့ ဒီညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုမြင်ကွင်းပုံရိပ်တွေအောက်က လွတ်မြောက်နိုင်ပါ့မလား။
စိတ်ပညာရှင်တွေအဆိုအရတော့ နှိပ်စက်သူ၊(တစ်ချို့သော နှိပ်စက်ခံရသူ)တွေဟာ စိတ်ရောဂါပညာရှင်နဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကုသပေမယ့် အနိုင်ကျင်လိုတဲ့စိတ်၊(နာကျင်မှုကို စွဲလမ်းစိတ်တို့)ကို ပျောက်အောင်ကုသနိုင်သူ ရာခိုင်နှုန်းအလွန်နည်းပါသတဲ့။ ဒါကြောင့် နှိပ်စက်ညှင်းပန်းခံရသူပဲ ဒီစိတ်ထောင်ချောက်ညွှတ်ကွင်းက လွတ်အောင်ရုန်းမှသာလျှင် ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုသံသရာပြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်တစ်နိုင်ငံတည်းမှာတင် ကိုယ်နဲ့ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သော (ချစ်သူ) ယောက်ျားများရဲ့ နှိပ်စက်မှုကိုခံရတဲ့ အမျိုးသမီးပေါင်း ၁.၅ သန်းရှိပါသတဲ့။ ဝမ်းနည်းဖွယ်ကောင်းစွာ သူတို့အမျိုးစုဟာလည်း ရီဟားနားလိုပဲ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်သူများနဲ့ ပြတ်စဲဖို့ စိတ်ခွန်အားယူနေကြသူများ၊ ကျောခိုင်းဖို့ ကြိုးစားနေသူများဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအမျိုးသမီးတွေကို ရီးဟားနားတစ်ယောက် လှည့်မကြည့်တော့ဘူးတဲ့လား။ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုစက်ဝန်းက အတူတကွလွတ်မြောက်အောင် မစွမ်းဆောင်တော့ဘူးလား။ အချစ်မှာစုံလုံးမျောကာ ပျော်သလိုပဲ နေတော့မှာလား။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ချစ်ခဲ့သူမို့ အပြစ်မမြင်ချင်ဘဲ ချစ်သောရီဟားနားတစ်ယောက် စိတ်ဓာတ်ခွန်အားပြည့်မယ့်နေ့ကို ကျွန်မစောင့်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ။
စာရေးသူ မယ့်ကိုး at 3/09/2013 11:12:00 PM
ကလေးအရွယ် နုနယ်စဉ်မှာ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှု စိတ်ဒဏ်ချက်တွေပေါ့နော် မမ ...
10/3/13 1:31 AM
စိတ်ပညာရှင်တွေအဆိုအရတော့ နှိပ်စက်သူ၊(တစ်ချို့သော နှိပ်စက်ခံရသူ)တွေဟာ စိတ်ရောဂါပညာရှင်နဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကုသပေမယ့် အနိုင်ကျင်လိုတဲ့စိတ်၊(နာကျင်မှုကို စွဲလမ်းစိတ်တို့)ကို ပျောက်အောင်ကုသနိုင်သူ ရာခိုင်နှုန်းအလွန်နည်းပါသတဲ့။
စိတ်ကို စိတ်နဲ့ပဲ ကုရတော့မယ်ထင်တယ်.။
အသည်းစွဲအောင် ချစ်တာ ဆိုတဲ့ စကားကိုတော့
ကျွန်တော် ကြားဖူးတယ် အစ်မမယ့်ကိုးရေ
ရီးဟားနားလည်း အဲ့ဒီလိုပဲ ထင်ပါရဲ့ ဟိဟိ
11/3/13 2:46 AM
ဖြစ်တည်လာတာထက်စာရင် နာကျင်မှုတွေကို မျက်ဝါးဝါးထင်ထင်တွေ့ရတဲ့အခါ နာကျင်မှုတွေနဲ့ ဝေးရာဆီကို ခေတ္တပြေးထွက်ခဲ့တာကမှ
တော်ရော့မယ်။ အဲ့တာကို အရှုံးပေးတာ၊ သရဲဘောကြောင်တာလို့ မမြင်ရက်နိုင်ပါဘူးလေနော်..။
11/3/13 6:28 PM
စိတ်ပညာရှုထောင့်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ စိတ်စံလွဲတယ်လို့ပဲ ခေါ်ရမယ်ထင်တယ်...တစ်နည်းအားဖြင့် ငယ်ဘ၀ကတည်းကစွဲနေခဲ့တဲ့ အတိတ်ပုံရိပ်ကို ပြန်ပြီးပုံဖော်နေခြင်းပေါ့လေ...သေသေချာချာ ကုသအားဖြည့်လိုက်ရင်တော့လည်း ပုံမှန်ဖြစ်မှာပါ...သို့ပေမင့် ကာယကံရှင်ကလည်း လိုလိုလားလားရှိပါဦးမှ...
12/3/13 8:27 PM
မယ့်ကို ဖေ့ဘုတ်မှာ မတွေ့တာ အတော် ကြာပြီ..
နေမှကောင်းရဲ့လား.. ခရီးသွားနေတာလား.. စိတ်ပူလို့..
22/3/13 5:34 PM
မယ်ရေ facebook မှာမတွေ့တာတော်တော်ကြာပြီမို့ ပြန်ပေါ်လာနိုးနဲ့စောင့်ကြည့်နေခဲ့တာ။ ကြာလာတော့စိတ်ပူလာလို့ သတင်းလာမေးတာ။ နေလို့မှကောင်းရဲ့လားမယ်။ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေနော်။ နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်အောင်မြင်ချမ်းမြေ့သော လူသစ်စိတ်သစ် ဖြစ်ပါစေလို့… ခင်မင်သောအားဖြင့် <3
15/4/13 7:35 AM
Mae yay !!
Ma ma Mya Thwe Ni, my dear Kyi Phyu Pine and dear Anonymous. ..
Thanks so much for ur kind comments. I am fine and I wish I can come back soon :)
နေကောင်းတယ်ဆိုတာ သိရလို့ ၀မ်းသာပါတယ် မယ့်ရေ။
18/4/13 7:48 PM
ထိခိုက်နာကျင်မှုကို မေ့လို့မရတဲ့ အမှတ်ရချက်ဟာ တစိမ့်စိမ့်စွဲထင်စေခဲ့တာလား ။ စိတ်ကို ပိုင်နိုင်ဖို့ဆိုတာကလည်း လူမည်ကာမျှထက် သာလွန်နေမှလား ။
30/4/13 6:21 PM